| ခရီးသွားခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ယခုယေဘုယျအားဖြင့်ဘုံသဘောထားပြင်းထန်၏သမိုင်းဇစ်မြစ် 17 ၏အဆုံးကိုဦးတည်သည့်ကာလမှအတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ပါတယ် "ခရီးစဉ်ကို" ။ စောစော 18 ။ ဥရောပ nobility ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏သားတို့အဘို့ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှုအသိသာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အထက်လူလတ်တန်းစားဖို့ချိန်းတွေ့ရာစုအခါပြီးနောက် "ဂရန်းခရီးစဉ်" (ကြီးတွေခရီးစဉ်) လူမှုရေးအရ, တာဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခရီးသွားလို့ခေါ်တဲ့မကြာခဏခေါ် "ခမ်းနားခရီးစဉ်" အများအားဖြင့်ပါရှုခင်းများနှင့်ရှေးထံမှအဓိကအားဖြင့်လူသိများအထိမ်းအမှတ, အလယ်ခေတ်နှင့် Renaissance လည်ပတ်ခဲ့ရာပြင်သစ်, အီတလီနှင့်စပိန်နာမည်ကြီးဥရောပအနုပညာမြို့ကြီးများအားဖြင့်လကြာဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အဓိကအားဘာသာစကားသင်ယူမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသိပညာဗဟုသုတဖြင့် foreground အတွက်လူထုအခြေပြုခရီးသွားဘို့မတ်တပ်ရပ်နေစဉ်, မြင့်မြတ်သောအမျိုးအနွယ်ကိုလည်း, သူတို့ရဲ့ခရီးသွားလာခြင်းဖြင့်အခြားအတော်ဝင်တရားရုံးများနှင့်အတူတန်ဖိုးရှိသောအဆက်အသွယ်ထူထောင်ရန်သူတို့၏အမူအကျင့်သနျ့, ခြံစည်းရိုး၏အနုပညာကိုသင်ယူသင့်ပါတယ်တရားမဝင်ခေါ်ဆောင်သွားအတွေ့အကြုံများကိုပါစေနှင့်အိမ်ထောင်ရေးရွေးချယ်စရာစစ်ဆေးပါ။
ဖွဲ့စည်းပျင်းရိခြင်းနှင့် 19 တစ်လျှောက်လုံးဒီအဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စောစော 20 ။ ရာစုနေဆဲလည်းလိုအပ်သောဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းများရှိခဲ့ကြောင်းမှလူဦးရေဘာသာရပ်၏သူတို့အားပုဒ်မကြောင့်ပညာရေးတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီမိုကရေစီဖို့ 1950er နှစ်အတွင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးအပြီးစီးပွားဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းထွန်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်မှာရောက်လာသည်နှင့်ခရီးစဉ်လေ့လာတယျ။
ထိုအချိန်မှစ. ပင်ကမ္ဘာ၏နိုင်ငံခြားအစိတ်အပိုင်းများမှခရီးသွားလျော့နည်းကောင်းမွန်စွာပယ်လူမှုရေးအုပ်စုများအတွက်အနီးအနားတတ်နိုင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဓိကအားသည်အခြား climes အတွက်ကြွင်းသောအရာနှင့်အပန်းဖြေ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ယနေ့တိုင်ခရီးသွားလာခေတ်သစ် holidaymakers အများစု, သို့သော်, ကျောင်းသားများအတွက်ပြည်ပမှာကျောင်းကဖလှယ်မှုနှင့်ပညာသင်ကာလ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို "ဂရန်း Tour" ၏အစဉ်အလာအတွက်အတော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်ပေမယ့်။
အားလုံးအယူဝါဒများ၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်သူလူများ၏ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလက်ဇန်းဒါးဗွန် Humboldt
ဤအတောအတွင်းရှည်ပြည်ပမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်ခရီးသွားအလုပ်တာဝန်ကျရာများအတွက်မန်နေဂျာစံနှုန်းငှားရမ်းအတွက်အလွန်လေးစားဖွယ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်နှင့်အမည်မသိအခြေအနေများ einuzulassen မှပွင့်လင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိ၏မြင့်မားသောဒီဂရီ herewith သူတို့ရဲ့အလားအလာအနာဂတ်အလုပ်ရှင်အချက်ပြ။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကား, ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်အစဉ်အလာများအထူးသဖြင့် intercultural အရည်အချင်းကိုနှင့်အသိပညာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုများအတွက် ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည့်ကာလအတွင်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ကိုလညျးမတားဆီးကြိုတင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများကိုကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုများအတွက်အရေးပါသောနှင့်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာကြပြီး အရှင်, နောက်ဆုံးမှာအဆိုပါစားသုံးသူကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို, လိုအပ်ချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်လာသည်။
နီးပါးမျှကုမ္ပဏီယနေ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံများကိုမပါဘဲန်ထမ်းငှားရမ်းရန်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိကာလ၌နှင့်ကတိုင်းရင်းသားနောက်ခံ unterschiedlichster များစွာသောလူအတူတကွအလုပ်လုပ်သောဿုံပုံမှန်နှင့်သဘာဝဖြစ်သည့်အတွက်ဒီဂျစ်တယ် oriented စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသီးအနှံအကြောင်းကိုမကြာခဏခရီးစဉ်လက်ခံမှုအားဖြင့်ဆယ်ယူနေကြခြင်းနှင့်ပြီးသားတစ်ဦး setting ကိုလိုအပ်ချက်အသက်နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအမည်ခံတခြားနည်းလမ်းတွေဆီသို့ဦးတည်သည်းခံစိတ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကဗီဒီယိုနှင့်အင်တာနက်ကွန်ဖရအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ခန့်မှန်းအစားထိုးခဲ့ပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါမှုကိုတိုးမြှင့်ထက်လျော့နည်းသွားခြင်း, တိကျသောစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ် မူတည်. နှင့်အတိအကျဌာနခွဲကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာပြည်ပမှာဖြစ်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာန်ထမ်းများကခန့်မှန်းထားသည်နှင့် သင့်လျော်စွာပြုမူနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်း 21 အတွက်ခရီးသွား။ ရာစု ပို. ပို. များနှင့်နောက်တဖန်အရေးကြီးသောလူမှုရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စွမ်းရည်များအတွက်စင်ကြယ်သောအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပေမယ့်သူကနိုင်ငံတကာစင်မြင့်များနှင့်လုပ်ရပ်အပေါ်ကောင်းစွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်, အရှင်ဖြစ်ပါသည်, ကရေရှည်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအတွက်ဖန်တီးကိုလည်းအိမ်မှာအလတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမဏီ & ဥရောပ
ဂျာမနီ - ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအပေါင်းတို့နှင့်အဓိကမြို့ကြီးများ
ဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံအဓိပတိ & နိုင်ငံတော်သမ္မတ
သြစတြီးယား - ပြည်နယ်တွေမှာနှင့်အရင်းအနှီး
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Canton နှင့်မြို့တော်
အားလပ်ရက် & အားလပ်ရက်
မိသားစု Friendly ဟိုတယ်
နိုင်အာဂရာရေတံခွန်ကနေဒါ / ယူအက်စ်အေ
ယူအက်စ်အေ - ပြည်နယ်နှင့်မြို့တော်
သင်တို့သည်ငါတို့၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖိုရမ်အတွက်အချို့သောအကြောင်းအရာများလက်လွတ်ပါသလား ကျနော်တို့တောင်မှသေချာပေါက်မိသားစုနှင့်ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအသစ်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ယူပျော်ရွှင်ကြသည်။ မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်!
ကနေဒါခရီးသွားခြင်း - နိုင်အာဂရာရေတံခွန်
Coloring အပြာရောင်ဗလီတူရကီ | ခရီးသွား
အီးယူအတွက်နိုင်ငံအားလုံး၏အလံ | ခရီးသွား